नेपालको नाडाअटो शो,मा राखिएको ७३ लाख ९० हजारको बाईक कस्ले किन्यो ? – सुदूरखबर डटकम
नेपालको नाडाअटो शो,मा राखिएको ७३ लाख ९० हजारको बाईक कस्ले किन्यो ?
label समाचार प्रकाशक query_builder September, 02 2019
काठमाडौं – नाडा अटो शोमा एमभी अगस्टाले प्रदर्शनका लागि राखेको एक्सक्लुसिभ बाइक ब्रुटाले ८०० आरआर एलएच४४ बिक्री भएको छ ।अति नै महंगो भएको र यसबाट चर्चामा आउन नचाहने क्रेता हुनाले कम्पनीले सो बाइक किन्ने ग्राहकको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
लुइस ह्यामिल्टन आफैले कस्टम डिजाइन गरेको यो बाइकमा कार्वन फाइबर कम्पोनेन्ट र मेसिन्ड बिलेट कन्ट्रोलको प्रयोग गरिएको छ । यसमा लिक्विड र आयल रेडिएटर कुलिङ प्रयोग गरिएको छ ।
शनिवारको दिनमा शनिदेवलाई खुसी पार्न कालो तिल दान गर्नुहोस, छोटो समयमै पुण्य मिल्नेछ